စမတ်ဖုန်းက Blue Light ဆိုတာ ဘာလဲ?
Blue Lights ဆိုတာကတော့ ပညာရှင်များရဲ့အဆိုအရတော့ ကျွန်တော်တို့ ဦးနှောက်ကို အိပ်မပျော်အောင် လုပ်နေတဲ့အရာပါပဲ။ Blue Light ကြောင့် အိပ်စက်ခြင်းကိုထိခိုက်စေတဲ့အကြောင်းနဲ့ ပက်သတ်ပြီး သုတေသနပညာရှင်များကတော့ ရှာဖွေ တွေ့ ရှိခဲ့တာကြာပါပြီ။ ခန္စာကိုယ်က နေ့ ၊ ည ဇီဝဖြစ်စဥ�
1 year ago Tips & Tricks • News
အမေများနေ့ရောက်တော့မှာဆိုတော့ အမေအတွက်ဝယ်ပေးလို့ရတဲ့ tech တွေ share ပေးလိုက်မယ်။ လိုတာရှိရင်လဲပြောနော်။Huawei Y Max လက်ရှိဖုန်းတွေထဲမှာ ဈေးလဲမများ performance အတွက် SoC က Snapdragon 660 နဲ့ 4GB/128GB ကို7လက်မ screen နဲ့လာတာဆိုတော့ လူကြီးတွေအတွက် သုံးလို့ကောင်းတဲ့ device ပါပဲ။ ဈေးနှုန်းကတော့ 369,
123456 ကို passwords အဖြစ် လူအများဆုံးသုံးကြောင်းရှာဖွေတွေ့ ရှိ
အကယ်၍သင့် password ဟာ ၁၂၃၄၅၆ ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ အမြန်ဆုံးပြောင်းလဲဖို့ အချိ်န်တန်ပါပြီ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ၁၂၃၄၅၆ ဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူအများဆုံးသုံးတဲ့ password လို့ UK ‘s National Cyber Security Centre ( NCSC) က ပြုလုပ်ထားတဲ့ သုတေသနစစ်တမ်း ပြုစုချက်အရ သိရှိရပါတယ်။ ဒါတင်မကပါဘူး လူနာမည်၊ အားကစာ�
သင်္ကြန်​အချိန် ​ဖုန်းထဲကို ​ရေဝင်​သွားတဲ့အခါ သင့်​ဖုန်းကို ဘယ်လိုလုပ်သင့်လဲ
သင်္ကြန်​ မှာ ​ရေပက်​ခံထွက်​မယ့်​ ကိုကို မမ​တွေအတွက်​ သိကိုသိထားသင့်​တဲ့ အ​ကြောင်းအရာတစ်​ခုကို share လုပ်​​ပေးမယ်နော်။ အဲ့တာကတော့​သင်္ကြန်​မှာလည်​ရင်း ဖုန်းထဲ ​ရေဝင်​သွားတဲ့အခါ ဘယ်​လို နည်းလမ်း​တွေကိုသုံးပြီး ​ မိမိဖုန်းကို ​ကာကွယ်​ရမလဲ ဆိုတာပါပဲ�
သင်္ကြန်မှာကဲပြီးရင်နားလို့ရမယ့်ဆိုင်တွေ share ပေးထားတယ်နော်။1 .) 24 Hrs Private Planet2.) 365 Cafe ( Ahlone Road )3.) 800 Bowls ( Urban Asia )4.) A.K.A BBQ(Kyite Wine Pagoda Road) 5pm-11:45pm5.) AJ's Bar and Grill (Corner of Bo Myat Htun Road and Anawratha Road )4pm-11pm6.) Alex's Gastro Bar ( Yaw Min Gyi Road ) 6:30pm-10pm7.) Asia Catering Resturant ( Insein Phawkan) 8 .) Asia Seafood (Corner of Baho Road, Ma Oo Pin Road and Nyaung Dong Road, Sanchang) 11am – 11pm9.) Ayam Penyet ( Myanmar Culture Valley ) 10 .) Babbet Bar (
ကိုယ့်ရဲ့ Social Media ပေါ်က ဓာတ်ပုံတွေကို ဆန်းသစ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ?
Social Media ပေါ်က သင့်ရဲ့ Facebook, Instagram စတဲ့ accountတွေကို အမြင်ဆန်းအောင်လုပ်ဖို့စိတ်ကူးရှိပါသလား? အဲ့တာဆိုရင်တော့ ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ လုပ်သင့်တာက လူတွေရဲ့ စိတ်ဝင်စားခြင်းကို ခံရဖို့ ဓာတ်ပုံကောင်းကောင်းလေးတွေ တင်တာနဲ့ စတင်သင့်ပါတယ်။ နည်းပညာတွေ တိုးတက်နေတဲ့ ဒီကနေ့ ကမ္ဘာ�
အချိန်နဲ့ တပြေးညီရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေကြတဲ့ အချိန်မှာ အားလုံးအတွက် တန်ဖိုးအရှိဆုံးအရာကတော့ အချိန်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ နေ့ စဉ်ကိစ္စတွေကို လုပ်ဆောင်နေရင်း ကုန်ဆုံးသွားတဲ့ အချိန်မှာ ဘယ်အရာတွေက ပြောင်းလဲနေပြီလဲ။ နေ့ စဉ်အချိန်နဲ့ အမျှ ပြောင်းလဲတိုးတက�
အမေရိကန် သမ္မတ နာမည်မှားခေါ်ပြီးနောက် Twitter မှာနာမည်ပြောင်းလိုက်တဲ့ Tim Cook
မနေ့က အမေရိကန် သမ္မတနဲ့ Apple CEO Tim Cook တို့တွေ့စုံပွဲမှာ အမေရိကန် သမ္မတ Trump က Tim Cook ရဲ့နာမည်ကို Tim Apple ဆိုပြီးမှားခေါ်လိုက်ပါတယ်။ အမေရိကန် သမ္မတ နာမည်မှားခေါ်တာ ဒီတစ်ခါမှ မဟုတ်ပါဘူးအရင်တုန်းကလဲ ဖြစ်ဖူးပါတယ်။ အဲ့လိုနာမည်မှားခေါ်လိုက်တဲ့အတွက် အင်တာနက်(အထူးသဖြင့် twitter မှာေ�
အသက် ၁၉နှစ်​နဲ့ ဝင်​​ငွေ ​ဒေါ်လာသန်းချီရ​နေတဲ့ တရားဝင် Hacker
Santiago Lopez ဆိုတဲ့ အသက်​၁၉နှစ်​အရွယ်​ Hacker ဟာ လက်ရှိမှာဝင်​​ငွေ ​ဒေါ်လာသိန်းချီ အထိ ရှိ​နေတဲ့ သူတစ်​​​ယောက်​ပါ။ Hacker တစ်​​ယောက်​လို့ ​ပြောပေမယ့်​ တရားဝင်​တဲ့နည်းလမ်းနဲ့ Website ​တွေ အွန်လိုင်း security ပိုင်းတွေ အတွက်​အလုပ်​လုပ်​ကိုင်​​ပေး​နေသူပါ။ Hacker ဆိုတိုင်း မ​ကေ
Dark Theme Mode ကို ဘာ့​ကြောင့်​​ပြောင်းသုံးသင့်​တာလဲ
အခု​နောက်​ပိုင်း operation system ​​ရော App မှာ ပါ ဦးစား​ပေးပြင်​ဆင်​လာတာက​တော့ ပုံမှန်​မြင်​​နေကြ Light (White)Theme ကို အစားထိုး ​​တော့မယ့်​ Dark Theme Mode ပါ။ Android ၊ iOS တင်​မကဘဲ macOS၊ Microsoft Windows၊ application ​တွေကပါ Dark Mode ကို ထည့်​သွင်းလာကြတာဖြစ်​ပါတယ်​။ ဘာ့​ကြောင့်​ Light (White ) Theme အစား Dark mode ကို ​ပြောင်း�
လုပ်ဆောင်မှုကွာခြားတဲ့ စမတ်ဖုန်း processor များအကြာင်း
ကျွန်တော်တို့ဖုန်းဝယ်တဲ့အခါမှာ လူတိုင်းသေချာမကြည့်တာကတော့ processor ပါပဲ။ ဖုန်းဝယ်တဲ့လူတော်တော်များများမေးလေ့ရှိတာက လိုင်းဆွဲအားကောင်းလား? Memory ဘယ်လောက်ပါလဲ? ကဒ်ထပ်စိုက်လို့ရလား? ကင်မရာ ရုပ်ထွက်ကောင်းလား? ဈေးကရောဘယ်လောက်လဲ? အစရှိတာတွေ မေးတာများပါတယ်။ ပြ
ကွန်ပျူတာ(သို့) မိုဘိုင်းဖုန်းကို အကြာကြီးသုံးပြီးတဲ့အခါ သင့်မျက်စိကို ဘယ်လိုအနားပေးရမှာလဲ
ကွန်ပျူတာ(သို့) မိုဘိုင်းဖုန်း က ကျွန်တော်တို့ နေ့စဉ်မဖြစ်မနေ သုံးရတဲ့ အရာတစ်ခုလို ဖြစ်လာတာပါ။ ကွန်ပျူတာ(သို့) မိုဘိုင်းဖုန်း ကို အသုံးပြုပြီး အလုပ်လုပ်နေရသူတွေဟာ ကြာလာရင်မျက်စိနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ရောဂါဝေဒနာတွေ တစ်ခုပြီး တစ်ခု ဖြစ်လာတတ်ကြပါတယ်။ နေ့ စဉ်နေ �
ဘာကြောင့် ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး Smart Highway က တရုတ်မှာ ဖြစ်နုိုင်ချေများတာလဲ
Smart Highway ဆိုတာဘာလဲလို့ ရှေ့တစ်ခါကပြောပြပြီးသွားပြီ။ မဖတ်ရသေးရင်တော့ အဲ့အကြောင်းအရင်သွားဖတ်နော်။ တရုတ်ရဲ့မြန်ဆန်တဲ့တိုးတက်မှုဟာ နည်းပညာကို မြို့ပြတည်ဆောက်ဖို့အတွက်သုံးတဲ့ အဆင်ပြေဆုံးနိုင်ငံတွေထဲက တစ်ခုအဖြစ် မြင်လာရပါတယ်။ ဒီလို နည်းပညာပိုင်းဆ�
Smart Highway ဆိုတာဘာလဲ၊ ဘာလို့ လိုအပ်ရတာလဲ
Smart Highway အတွက် အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုချက်တွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ယေဘုယျ အားဖြင့် ဆိုရင်တော့ ဒီလို Smart Highway လမ်းတွေက တိုးတက်သော နည်းပညာတွေ နဲ့ လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ လမ်းမများမှာ အသုံးပြုသွားမှာပါပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုမျိုးတွေလဲဆိုတော့ ဆိုလာကနေ တစ်ဆင့် စွမ်းအင်တွေ ထု�
Social Media ကြောင့်ရလာတဲ့စိတ်ဖိစီးမှုကို ဘယ်လို ကာကွယ်မလဲ
Social media ဆိုတာ သူငယ်ချင်းတွေ၊ ကိုယ်ချစ်ရသူတွေနဲ့ အဆက်အသွယ်မပြတ် အောင်အမြဲ ဆက်သွယ်ပေးနေတဲ့ နေရာလေးတစ်ခုပါ။ Social media ပေါ်မှာ (ဥပမာ - facebook ၊ Instagram) ကိုယ်ကြိုက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေ တင်ကြတယ်။ အကြိုက်တူရင် share ကြတယ်။ တကယ့်ကို နည်းပညာက ပြုလုပ်ထားတဲ့ ပျော်ရွှင်မှု ကို ခံယူေ
Apple ကုမ္ပဏီကိုတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ Steve Job
အခုဆိုရင် Steve Jobs လို့ ပြောလိုက်တာနဲ့ မသိသေးတဲ့ သူ ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်။ဒါပေမယ့် နည်းပညာကို တစ်ခေတ် ဆန်းစေခဲ့သူကို ရာဇဝင်ထဲမှာ ပဲ ထားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အရမ်းကို မိုက်မဲ ရာကျမှာပါ။ လူတွေအတွက် မရှိမဖြစ်အရာတစ်ခုလို ဖြစ်လာတဲ့mobile phone ဟာ နေ့ စဉ်ဘဝမှာ တော်တော်ေ�
အခုနောက်ပိုင်းခေတ်စားလာတဲ့ point system
Admin အခုပြောမယ့်အကြောင်းအရာ က သိတဲ့ သူလဲရှိရင်ရှိမယ်။ မသိတဲ့ သူ ကတော့လူ ၁၀၀ မှာ ၈၀ လောက်က မသိဘူး လို့ ပြောလို့ ရတယ်။ ဘာအကြောင်းအရာလဲဆိုတော့Grab ၊ Junction Mall ၊ MPT ၊ Ooredoo၊ City Mart စတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေမှာ အခုနောက်ပိုင်းသုံးလာတဲ့ point system ပါပဲ။ Point System ဆိုတာက admin တို့ ​ဈေးဝယ်​ထွက်​ကြတဲ �
ငွေသားကိုင်တွယ်အသုံးပြုမှုကို လျှော့ချဖို့ ဗဟိုဘဏ်က တိုက်တွန်းပြောကြား
ငွေသားကိုင်တွယ်အသုံးပြုမှုကို လျှော့ချဖို့ ဗဟိုဘဏ်က တိုက်တွန်းပြောကြားတယ်ဆိုပြီး သတင်းတစ်ခုဖတ်လိုက်ရလို့ ဒါလေး share ပေးတာပါ။ အဲ့ သတင်း source ကတော့ ဒီ link ကပါ။ဒီသတင်းရဲ့အဓိက ကတော့ လတ်တလောမှာ တစ်သောင်းတန်ငွေစက္ကူအတုများ ဖမ်းဆီးရရှိမှုများလာနေသောကြောင့်
လွတ်လပ်ရေးနေ့ ပိတ်ရက်အတွက် ပျော်စရာ "Carnival by Indoor Skydiving" ပွဲတော်ကြီး
Admin က အရမ်းအရမ်း ကို စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကို ပြောပြမယ်ဆို နားထောင်ချင်ကြလား။ လွတ်လပ်ရေးနေ့ holiday မှာ ရော ဘယ်သွားရင်ကောင်းမလဲ စဉ်းစားနေကြတုန်းလား။ ဒါဆိုရင်တော့မနက်ဖြန်မှာ ကျင်းပပြုလုပ်မယ့် Carnival by Indoor skydiving အကြောင်းလေး share ချင်ပါတယ်။ ``Shar
YouTube Rewind 2018 ထက် PornHub 2018 year in review ကို လူတွေပိုစိတ်ဝင်စားကြမယ်ထင်တယ်
Admin တို့ဘာမှရှင်းပြမနေတော့ဘူးနော်။ အောက်က data တွေတာကိုယ့်ဟာကိုကြည့်ကြည့်လိုက်တော့....PS4 Gamer တွေမထင်ရဘူးနော်.....😏😏😏ပို့စ်အရှည်ကြီးပြီးအောင်ကြည့်လိုက်ရတဲ့အတွက် အာလူးယူသွားဦးနော်...